IIKHITSHI EZINGAMA-25 ZECHERRY WOOD (IKHABHINETHI YOYILO KUNYE NEMIBONO) - UYILO LWEKHITSHI
Eyona uyilo Lwekhitshi Iikhitshi ezingama-25 zeCherry Wood (iKhabhinethi yoyilo kunye nemibono)
Iikhitshi ezingama-25 zeCherry Wood (iKhabhinethi yoyilo kunye nemibono)
Le galari inezinto ezintle iikhitshi zomthi we-cherry kwiindlela zangoku, zangoku, ezirhabaxa kunye nezesiko zoyilo. Iikhitshi ezinamakhabethe eenkuni ze-cherry zinikezela ngenkangeleko efudumeleyo nenobunewunewu kwaye zihambelana kakuhle nezinto ezahlukeneyo zokubala kunye nokugqiba.
Eli khitshi livulelekile ngqo kwindawo yokutyela nakwindawo yokuhlala, eyahlulwe kuphela ziikhawuntari zekhabhathi ezisebenza njengokwahlula phakathi kwezinye iindawo eziqhelekileyo kunye nekhitshi. Isiphumo siyikhitshi eliqaqambileyo nelikhanyayo, ngaphandle kokusebenzisa iikhabhathi zeenkuni eziqinileyo ezifakwe igranite emnyama. Ukutya okuziinkozo kwendalo kunye nokuthungwa kweekhabhathi zomthi eziqinileyo, zidityaniswe nedrowa emnyama kunye nekhabhathi etsala indawo, yenza uluvo oluhlaza ngakumbi, lweshishini kwisithuba, ngelixa ligcina isithunzi sayo esihle.
Iikhabhathi zekhitshi laseCherry Wood
Iicherry Kitchen Cabinets Pros and Cons
Imibala yeKhitshi yepeyinti kunye neeCherry Cabinets
Ukutshatisa iCherry Kitchen Cabinets kunye ne Granite Countertops
Iikhabhathi zekhitshi leenkuni zecherry zihle kwaye zilungele ngokufanelekileyo abo bafuna indawo efudumeleyo nenhle yekhitshi. Ngeetoni zazo ezityebileyo zokhuni, iinkuni zetsheri zihlala zisetyenziswa kwifenitshala nakwiikhabhathi. Umthi ungangcoliswa, okanye ushiye ubumnyama ngokwendalo ngokuhamba kwexesha. Kuba iinkuni zamkela ngokugqibeleleyo ukugqwesa kunemibala eyahlukeneyo yemibala yecherry esetyenziswe nekhabhathi.
Umthi weCherry uvela ikakhulu e-US okanye eCanada kwaye uhlala uneempawu ezintle ezenza ukuba ufune kakhulu. Obu buhle buza ngeendleko, busenza iikhabhathi zecherry enye yezona zinto zibiza kakhulu. Ukufumaneka nakho kuyinkxalabo, kuba abafumaneki rhoqo kwiivenkile ezinkulu. Ke ngoko umntu kufuneka afune umakhi wekhabhinethi onamava ukuze enze umsebenzi. Ngokwesiqhelo iikhabhathi zomthi wetsheri zinokunyusa iindleko ngaphezulu kweekhabhinethi zebirch eziqhelekileyo ngama-20-25% okanye nangaphezulu.
Kukho ezinye iindlela kwabo bafuna ukunqanda ukuchitha ixabiso eliphezulu kwiikhabhathi zekhitshi zekhitshi. Inye kukuthenga ikhabhathi esemgangathweni ophezulu kwaye uyihlambele ngecherry. Ibala liya kungena kwiingqolowa zeenkuni ukuze likunike imbonakalo yecherry oyifunayo. Enye indlela yokujonga ngendlela efanayo kukugcoba. Ukugcoba iikhabhathi zakho zekherry yinkqubo apho isinxibo se-glaze sisetyenziswa emthini ukuvelisa ukubukeka okudala okanye okubandezelekileyo. Zombini i-glaze kunye nebala lukhetho oluthandwayo oluya kukuvumela ukuba usike iindleko kwaye ujonge indlela ozifuna ngayo iikhabhathi zekhitshi.
Kulo mfanekiso ungasentla kwemigangatho yeli khitshi sebenzisa imigangatho eqinileyo yomthi wecheri, ngoko ke ikhitshi livula umnyama omnyama wokugqiba iinkuni zecherry kwiikhabhathi zaso zasekhitshini ezenziwe ngamaplanga, zenza umahluko ocekeceke phakathi kwezi zinto zimbini. Iinkcukacha zeCornice, ukutsalwa kweediliya kunye negranite yokhilimu kwibala lokubala kunye nokubuyela umva konke kudibanisa ukwenza imvakalelo entle kakhulu kule khitshi, kudala uyilo oluhle olungapheliyo lwekhitshi.
Akunakuphikwa ukuba iikhabhathi zekhitshi zekhitshi zivelisa ubuhle kunye nomtsalane obonakalayo, kodwa ngaphandle kokuba ne-aesthetics entle, iinkuni ze-cherry ikwayi-archetype yokusebenza okusebenzayo.
Zininzi izizathu zokuba kutheni iinkuni ze-cherry zenza ukhetho olusengqiqweni kwikhabhathi yekhitshi. Okokuqala kukuzinza. Nangona ingenakomelela njenge-oki, iinkuni ze-cherry zomelele ngokwaneleyo ukuba zisetyenziswe ixesha elide. Kuyaziwa ngokuba nenqanaba eliphakathi lamandla-anzima, anzima kwaye anokugcina kunye nokuwohloka kunye nokusetyenziswa kwemihla ngemihla.
Xa kuziwa kwiindleko, iikhabhathi zekhitshi zekhitshi ze-cherry zikwindawo ethile kumaxabiso aphakathi. Akubizi kwaye ayibizi kangako. Phakathi kweenkuni ezimnyama, iinkuni zetsheri zifikeleleka ngakumbi kune-ebony kunye ne-mahogany ngelixa zithelekiswa nemephu okanye i-oki, zibiza ngaphezulu. Nangona kunjalo zingqina ukuba zilutyalomali olulungileyo, zibuyisa izibonelelo ezifanelekileyo ekuhambeni kwexesha. Ikwafumaneka ngokubanzi kwimarike kwaye inokuthengwa kwiivenkile ezikwi-Intanethi, abathengisi beenkuni abakhethekileyo kunye nabenzi bekhabhathi.
Ukubuyela kwesona sizathu siphambili sokuba kutheni abaninikhaya bethanda iikhabhathi zekhitshi, ixabiso lobuhle lolunye lweempawu ezintle zalo mthi uphakamileyo. Iza ngombala otyebileyo otyebileyo kunye nokuthambeka okunzulu okuzisa ukubukeka okunethezeka ekhitshini. Obu butyebi bukwazisa ubushushu obwahlukileyo ngaphakathi, buvelisa umoya ococekileyo kunye nokwenza ukuba indawo ibe nomtsalane ngakumbi. Ngenxa yoko, le meko yokwamkela yenza ukuba iindwendwe zizive zisekhaya.
Ubuhle bayo buyanda njengoko budala, le yenye yeempawu zayo ezizodwa. Kuba umthi wecherry ubuthathaka ngokukhanya, umbala wawo ocacileyo obomvu ubumnyama ngokuba mdala ngokuphuhlisa i-patina eqaqambileyo eqina ngokuguga. Le nguqulelo intle yombala yenye yezona zinto zifunwa emva kweempawu zeekhabethe zekhitshi. Kwakhona, iikhabhathi zekhitshi zekhitshi zinesibheno esingapheliyo.
Yimveli kodwa iqinisekisiwe ukuba ayisoze yaphuma kwisitayile. Iyahluka kwaye isebenza kakuhle ngeendlela ezahlukeneyo zoyilo. Iikhabhathi zeenkuni zeCherry zinokutshatisa ngokulula naluphi na uhlobo lokuhonjiswa kwekhitshi kunye nayo nayiphi na inkuthazo yoyilo, nokuba inokuba yeyesiko, ilizwe, i-rustic, yangoku okanye yanamhlanje. Kuxhomekeke kuhlobo lokusila olusebenzayo, iikhabhathi zeenkuni zecherry zinokubopha ngokulula ukubonakala okukhoyo kunye nesitayile sendawo. Ukujongeka kwayo kubhetyebhetye ngokwaneleyo ukuhambelana nezikimu zemibala eyahlukeneyo. Ukongeza koku, iikhabhathi zomthi zetsheri zinokusebenza njengeziqwenga ekugxilwe kuzo hayi ekhitshini kuphela, kodwa nakwindlu iphela.
Kukho iingxaki ezimbalwa ekusebenziseni ikhabethe leenkuni ze-cherry, kodwa ke iimpawu zayo ezintle zigqithise ezimbi. Njengalo naluphi na olunye uhlobo lomthi, luyathanda ukuhlaselwa zizinambuzane, kodwa ke oku kungaqwalaselwa ngokusebenzisa amanyathelo othintelo njengonyango kunye nobungqina bokutya. Kwakhona, ayinyangeki ngamanzi. Ukugcina amanzi angangeni nakwikhabhathi yakho yasekhitshini, qiniseka ukuba usula nakuphi na ukuchitheka kwangoko ukuze kungavelisi bala.
Okokugqibela, nangona yomelele kwaye yomelele ngokwaneleyo, kusekho utyekelo lokuba lukrweshwe ekuhambeni kwexesha. Zonke ezi ngxaki zinokuthintelwa ngokulondolozwa okufanelekileyo, unyango kunye nokhathalelo lokuqinisekisa ukuba iikhabhathi zeenkuni zecherry zikwimo entle. (Ndwendwela eli phepha ukubona igalari yethu epheleleyo ye Izitayile zekhabhinethi yasekhitshini )
Ikhitshi elikhulu, langoku eliqinisekileyo elandisa yonke indawo ekhoyo eludongeni ukwenza uyilo lwekhitshi. Kwelinye icala lodonga yindawo yokugcina i-pantry yokuphakama okupheleleyo / ikhabhathi enefriji eyakhelweyo kunye nenqaba ye-oveni. Isebenzisa ii-laminates zomthi we-cherry kuyo yonke indawo, kwaye iprofayile ethe tyaba yeekhabhathi ngokuqinisekileyo iyinika ukucoceka, ukujonga okwangoku. Ukunceda ithoni phantsi kobomvu ukusuka kwikhabhinethi yokugqitywa, izinto zokubala zenziwe nge-quartz ekhanyayo, ngelixa i-backsplash iithayile zeglasi ezinombala okhilimu.
Le yikhitshi yelizwe elisebenzisa iikhabhathi zekhitshi ezilula ezifakwe kumagqabi amnyama e-cherry. Ukuchazwa kakuhle kweekhabhathi kuyinika ubuhle, kodwa isibheno sanamhlanje ngenxa yemigca ecocekileyo, ethe tye. Embindini sisiqithi sekhitshi esiphinda kabini njengendawo yokutyela / yokutyela. Izinto ezisetyenziswayo kwiikhawuntari zisetyenziselwa igranite yekhrimu yesiqithi sasekhitshini, kunye nequartz yekhrimu kwiikhabhathi ezisisiseko. Okwangoku, i-backsplash ihonjiswe ngetayile ekhanyayo emthubi, yongeza ubume kunye nombala othambileyo kumbala.
Ikhitshi elibanzi elizeleyo elinolwakhiwo olwahlukileyo kunye nokudityaniswa kokugqitywa. Isebenzisa ii-laminates ezenziwe ngokhuni oluphezulu olubengezelayo olume ngokuqinisekileyo kumgangatho wekhrimu kunye neendonga ezimhlophe. Oku kudityaniswa negranite yekrimu kuzo zombini ii-countertops kunye ne-backsplash, kunye ne-matte emnyama kunye nebrashi engenasiphelo egqityiweyo, ukuyinika ukuziva kwangoku.
Le yenye indawo ephefumlelweyo yelizwe ekhitshini enesicwangciso somgangatho ovulekileyo osebenzisa iinkuni eziqinileyo ezifakwe iingcango zekhabethe leenkuni ezenziwe ngegreyite egreyiti. Iveze iitringi zeenkuni ezinesilingi ngokugqitywa kweenkuni ze-cherry, ngelixa iiplanga ezisetyenzisiweyo kwiibhodi zesilingi zigqityiweyo ezimhlophe, zinceda ukungathathi hlangothi kunye neethoni phantsi kweetoni eziorenji kunye nezityheli zomthi kunye nokugqitywa komgangatho.
Eli khitshi libanzi linomtsalane kwisibheno esihle, kunye nokusetyenziswa kweekhabhathi zekhitshi zekhitshi eziqinileyo ezifakwe i-beige granite. Uyilo oluvulekileyo lwekhitshi luyanceda ekwenzeni ukuba indawo ibonakale ikhanya ngakumbi kwaye ivulekile, ngelixa isilingi esiphakamileyo, esinomlinganiso ohambelana neekhabhathi zasekhitshini, sisebenzisa iiplanga zomthi wecherry, ekongeza ubume kwelinye icebo lobulumko kunye nemiphezulu elula yezinto zangaphakathi.
Eli likhitshi eliya ngeskimu sombala obomvu ongqindilili, esenza ukuba ivele kwezinye iindawo ezinemibala engathathi cala. Iindonga zazipeyintwe ngombala obomvu ngezitena, ngelixa iikhabhathi zasekhitshini zazilaminishwe ngombala omnyama wecherry, nawo onendawo ephantsi ebomvu. Ukunceda ulungelelanise imibala, i-counter top esetyenzisiweyo yigreyite enemibala ekhilimu, ukongeza indawo engathathi hlangothi kwisithuba ngelixa unceda ithoni phantsi ukuzithemba kweetoni ezibomvu.
Ikhitshi lesitayile esidala elinenkcazo yemveli libukeka lihle ngakumbi njengoko lisebenzisa iinkuni ezimnyama ezimnyama kuzo zonke iikhabhathi zaso, zidityaniswe namabala okubala egranite amnyama kunye nomqolo obuyela umva. Ngaphandle kwembonakalo yeklasikhi, ikwasebenza nakwezinye izinto zangoku njengokukhanya okungaphantsi kwekhabinethi ukukunceda ukukhanyisa indawo yokusebenza.
Ikhitshi lesitayile seklasikhi esiya kujonga inkalipho kuyo yonke imithi. Imigangatho yenziwe ngobuchule bokhuni betsheri, ngelixa iikhabhathi zekhitshi zenziwe ngeplanga yomthi wecherry, zidityaniswe nelitye lekalika yekalika. Izandi ezingaphantsi zidityanisiwe zijongeka zi-orenji ngakumbi, kwaye ngenxa yoko ziyahambelana ngokugqibeleleyo kunye nekhilimu kunye neethayile zeorenji ezisetyenziswe kwi-backsplash.
Ikhitshi ekhethekileyo yelizwe ekhitshini eneentlobo ezahlukeneyo zokugqitywa kweenkuni. Imigangatho yi-oki eqinileyo yegolide, ngelixa iitrasi eziveziweyo ezineeplanga zomthi zi-teak eqinileyo. Isibane esibhakabhakeni sinika ukukhanya okuqaqambileyo kwisithuba, sinceda ukwenza imibala yeekhabhathi zasekhitshini ziphume. Iikhabhathi yindibaniselwano ye-oki emnyama kunye neenkuni ezibomvu ezibomvu. Kukwakhona nekhawuntari enkulu yesiqithi ekhitshini embindini wekhitshi enesiseko som-oki esimnyama kunye nekhawuntari emnyama yesepha.
Umbala wendalo otyebileyo otyebileyo weekhabhathi zetsheri wenza indlela yamathuba amaninzi kuyilo. Enkosi kubomvu obuphantsi kwayo, ukuyila iskimu sombala esifanelekileyo sokuhamba nayo kunokuhamba naphi na ukusuka ekuphuculeni ukubukeka kwayo okunethezeka ukunciphisa ubutyebi bayo.
Kukho imibala emininzi yepeyinti eludongeni enokuphononongwa ukufanisa iikhabhathi zekhitshi ezimnyama-ukusuka kumbala omhlophe ocekeceke, ukungathathi hlangothi, i-pastel e-mellow kunye ne-shades ezityebileyo. Umbala ofanelekileyo uya kuxhomekeka ngokupheleleyo kwinkangeleko ofuna ukuyiphumeza kunye neempawu zobuhle ofuna ukugqama, nokuba kungangumahluko okanye ukuvumelana.
Ukukhetha umbala wepeyinti olungileyo oza kuhamba nawo neekhabhathi zakho ze-cherry kunokukunceda uvelise uyilo lwekhitshi oludibeneyo kunye nomtsalane omangalisayo ngokunjalo. Apha ngezantsi sikunika imibala yombala wepeyinti ukukunceda uthathe isigqibo sokuba yeyiphi eyona ilungileyo kwiikhabhathi zakho zetsheri:
Ukungathathi cala -Imibala engathath'icala yimibala engabonakaliyo kwivili lemibala. Oku kubandakanya abamnyama, abamhlophe, imibala engwevu namdaka. Kukwabhekiswa kuko njengeetoni zomhlaba, isizathu sokuba zifunyenwe kwindalo. Oku ngamanye amaxesha kubandakanya, imifuno kunye negolide etyheli ngokunjalo. Le mibala ithandwa kungekuphela kuyilo lwangaphakathi kuba zinokuhamba kakuhle nangantoni na. Ukuxuba kunye nokutshatisa yeyona nto iphantsi yexhala lakho xa usiya ngombala ongathathi hlangothi wekhaya lakho.
Xa zidityaniswe neekhabhathi zetsheri, udonga olunombala olungathathi hlangothi luyayonyusa kakhulu imithambo ephantsi efudumeleyo, isenza ukuba indawo imeme ngakumbi. Isebenza ngasemva ngobuqili ngombala obomvu obomvu weplanga yomthi kwaye ayikhuphisani nobutyebi bayo. Kwakhona, yenza ukuba iinkuni zibonakale zicocekile kwaye zikhanya ngakumbi.
ngwevu -Umbala ongwevu, uthathelwa ingqalelo njengeyona ndlela intsha emhlophe, isebenza kakuhle kwiikhabhathi zetsheri kuba idala isiphumo esibi, kodwa iseyisiwe kwaye ayoyiki. Ikwindawo efanelekileyo endaweni yabo bafumanisa ukuba imhlophe okanye i-beige icace gca kwaye iyadika kuba ingwevu inika amandla okuzola kwiindawo. Kwelinye icala, imibala efudumeleyo engathathi hlangothi enjengegolide etyheli, ubusi obukhanyayo okanye umthunzi webhotolo obumbeneyo, zonke zongeza ukufudumala kwiikhabhathi zetsheri. Oku kugqibelele ukuba ufuna ukongeza umbala kunye nokwazisa indawo ethile ekhitshini lakho ngaphandle kokwenza umdlalo omninzi.
ntsundu Imibala emdaka, efana nesanti, i-tan okanye i-mocha ekhanyayo ifezekile ukuba ufuna ukuhamba ngeskimu sombala we-monochromatic. Le mibala incedisa umbala okhoyo wemithi kunye nobungqongqo bendalo, okwenza indawo ibe sekhaya ngakumbi kwaye imeme. Nangona kunjalo, xa ukhetha umthunzi omdaka ngepeyinti yakho, hamba nomthunzi omnyama kuba oku kuyakukufihla iikhabhathi zakho zetsheri bubuhle bokwenyani buqu, into yokugqibela onokufuna ukuyenza kukukufihla oko. Khumbula ukuba xa usenza iskim se-monochromatic scheme esibonakalayo, imibala yombala kufuneka ilungelelaniswe kakuhle ukwenza umlinganiso othile.
Kwimibala engathathi hlangothi, thintela umnyama kuba umnyama kakhulu kwaye unokungqubana nobomvu obuphantsi kweekhabhathi zekherry. Olu dibaniso lunomdla wokuvelisa uyilo olunzima kakhulu emehlweni kwaye unokuziva uxineke kakhulu.
mhlophe -Umhlophe uthathwa njengowona mbala ubhetyebhetye njengoko uhamba kakuhle nangantoni na. Ngaphandle kwalonto, iindonga ezimhlophe zinembonakalo engapheliyo eya kuthi ngokuqinisekileyo ingaze iphume ngesitayile nokuba ungoyintoni na uhombiso lwakho. Lo mbala waseludongeni usebenza ngokukuko kunye nekhabhathi ekhanyayo kunye emnyama ekhitshini, kubandakanya iinkuni ezimnyama zetsheri.
Iindonga ezimhlophe zilungele ukudala umahluko omkhulu phakathi kweekhabhathi zetsheri ezimnyama. Ukuba ikhitshi lakho lincinci, oku kuya kunceda ekwenzeni indawo yakho ibonakale inkulu, ivuleke ngakumbi kwaye inomoya. Ikwaqaqambisa indawo kwangoko, ngaloo ndlela yenze ibhalansi egqibeleleyo kunye nobutyebi bekhabethe yetsheri.
Umbala omhlophe uza kwiithoni ezahlukeneyo umntu anokuzihlola. Iindonga ezimhlophe ezimhlophe kunye neekhabhathi ezimnyama ziyasebenza ukuba ufuna ukudibanisa iklasi kunye nexesha langoku. Ukuba awuyithandi inkangeleko eqaqambileyo yeendonga ezimhlophe eziqaqambileyo kunye neekhabhathi zetsheri, ungasoloko ukhetha omnye umthunzi. I-Beige, i-creams, abamhlophe abamhlophe kunye nalabo abane-undertones efudumeleyo basebenza ngokukodwa kakuhle ngekhabhinethi yamnyama.
Abefundisi -Imibala ekhanyayo lukhetho olufanelekileyo ukuba ufuna ukongeza umbala kumbala wakho wombala. Yazisa umbala ngaphandle kokuzibophelela kubunzulu bee-hues ezicacileyo. Le mibala ye-pastel inokuba neendawo ezipholileyo okanye ezishushu ezifudumeleyo kuyo. Imibala ye-pastel enee-undertones ezipholileyo iluhlaza okwesibhakabhaka, luhlaza ocacileyo kwaye ingwevu opholileyo, ngelixa abo banesandi esiphantsi sepesika, mthubi mthubi. Ukuphola okuphantsi komhlaba kuphakamisa iinkozo kwiikhabhathi ezenza ukuba iinkuni zibonakale ziqaqambile.
Ngaphandle kwee-pastels, ungasoloko uthambisa umthunzi othile wombala kwindawo ethotyelwe ngakumbi kwaye ithulisiwe. Yithi eluhlaza umzekelo, inokuxutywa ibe ngumbala oluhlaza okrelekrele. Oku kubonelela ngezinye iindlela onokuhombisa ngazo ikhitshi lakho.
Njengombala omhlophe, imibala ye-pastel yenza inkohliso yendawo enkulu kakhulu. Xa isetyenziselwa iikhabhathi zetsheri ezimnyama, inkangeleko ilunge ngakumbi. Ubutyebi bomthi bukwaphuma ngakumbi. Ke sebenzisa le mibala ukuba ufuna ukwenza ikhabethe yetsheri njengeyona ndawo iphambili ekhitshini lakho. Ukongeza koku, imibala ekhanyayo ikwadala imeko eqinisekileyo ekhitshini.
Luhlaza -Ukwenza umahluko omangalisayo phakathi kweendonga zekhitshi lakho kunye nekhabhathi yetsheri emnyama, zama ukuhamba nombala ohambelana nayo. Ngokusekwe kwivili lombala, imibala ehambelana nayo yile ifunyenwe ngokuchasene nomnye. Umbala ohambelana nombala obomvu uluhlaza, kwaye ukusukela iikhabhathi zekherry zinombala obomvu krwe, imibala eluhlaza isebenza kakuhle ekwenzeni umahluko. Iziphumo zolu dibaniso luyilo olubonakalayo olunomdla olugcwele ubunzulu. Oku kukwenza umbala weenkuni ubonakale ukhanya ngakumbi kunye neenkozo zawo ukuphuma ngakumbi.
Imibala eyahlukeneyo eluhlaza inokuphononongwa, kuxhomekeka kwisiphumo ofuna ukusifumana ekhitshini lakho. Uhlaza olunzulu nolumnyama njengoluhlaza lwehlathi, umzingeli oluhlaza kunye nohlaza womnquma zilungile ekuphuculeni idrama esithubeni, ngelixa i-shades ethulileyo efana ne-sage green kunye ne-moss green inceda ukuthoba ubutyebi beekhabhathi zetsheri. Imibala e-Mellow efana neti eluhlaza kunye ne-celadon eluhlaza, yazisa umbala kwaye yenza isiphumo esifihlakeleyo esivumela ubuhle beekhabhathi zekherry ukuba zivele.
Ezinye iingcebiso ezongezelelekileyo ekukhetheni umbala wodonga olufanelekileyo lweekhabhathi zekherry:
- Chonga ukuba ufuna ukudibanisa okanye ukuthelekisa. Eli linyathelo lokuqala ekufuneka ulwenzile ekukhetheni umbala wepeyinti ofanelekileyo ukuze utshatise iikhabhathi zekhitshi. Umahluko wongeza ubunzulu kunye nomdlalo kwindawo, ngelixa ukudibanisa kukwenza ukujonga okuhambelana. Yomibini le migaqo yoyilo inceda ukudala uyilo olumangalisayo lwekhitshi.
-Sebenzisa ivili lemibala njengesikhokelo sakho sokwenza imibala emangazayo kwiikhabhathi zekherry. Ukwazi isiseko sombala kuya kukunceda uvelise iphalethi yombala esebenzayo kunye nenomdla hayi ekhitshini lakho kuphela, kodwa nakwikhaya lakho. Ivili lemibala sisixhobo esisebenzayo sokuhombisa esinokukunceda uphelise uqikelelo ekukhetheni umbala ofanelekileyo wepeyinti kwiindonga zakho. Ngale nto ungakhangela iskimu esincedisayo-ukuba ufuna ukwenza umahluko, okanye iskim sokufana-ukuba ufuna ukudibanisa ngokuvumelanayo.
-Awusoze uhambe gwenxa ngeskimu sombala we-monochromatic. Iskimu sombala we-monochromatic konke malunga nokufumana ibhalansi elungileyo kunye nokusebenzisa imibala echanekileyo kwinto nganye ebonakalayo ekhitshini lakho. Kuba iikhabhathi zetsheri zimnyama, unokukhetha umbala omnyama okhanyayo kumgangatho wakho, kunye nombala okhanyayo weendonga.
-Thintela okubomvu. Kuba bomvu lelona zwi liphantsi lekhabhathi zetsheri, ukuthelekisa nalo nodonga olubomvu kungasongamela indawo. Nangona bekwiqela elifanayo lombala, kukho utyekelo lweekhabhathi zetsheri kunye neendonga ezibomvu zokukhuphisana ukuze ziqwalaselwe. Kwakhona, thintela imibala ecacileyo kwaye eqaqambileyo njengoko inokugqitha umbala wakho wekhabhathi. Iorenji, pinki nemfusa nayo ayihambelani kakuhle nekhabhathi yetsheri.
-Thathela ingqalelo zonke ezinye izinto ekhitshini lakho. Umbala weendonga zakho yenye yemibala emikhulu exhaphake ekhitshini lakho. Qiniseka ukuba ukhetha umbala wepeyinti oya kudibanisa zonke ezinye izinto kuyilo lwakho ngobuhle. Oku kubandakanya izixhobo zombane, izinto zokwenza imigangatho, i-countertop, izixhobo zekhompyutha, izinto zefanitshala, ifanitshala, njl.
Imibala ehambelanayo (luhlaza) = umahluko, idrama, yenza umbala wecherry pop
Ukungathathi hlangothi (browns) = ukudibanisa, kwandisa ubushushu
Iipaseli okanye iMibala yokuKhanya = iithoni ezantsi kombala weenkuni zetsheri
mhlophe = yenza iikhabhathi zetsheri zibonakale zicocekile kwaye zikhanya ngokuqaqambileyo
Ukuya kwinkangeleko yanamhlanje, eli khitshi lisebenzisa iprofayili yekhabinethi elula ngakumbi, kunye nococeko, ukugqibezela okufanayo, kufezekiswa ngokusebenzisa ii-laminates zomthi we-cherry. Bhangqa ngegranite enemibala e-cream kunye neethayile ezibuyela umva ngamatye, ukubonakala kwayo kulungelelene, kodwa kubukeka.
Iinkcukacha zokwakha zakudala zaseSpain zendlu nazo zaziswa kuyilo lwekhitshi ukuze zilingane. Inenkangeleko enesibindi kwaye inzima kuyo, kuba imigangatho ipolishiwe iinkuni zetsheri, kunye nekhabhathi zasekhitshini, kunye neminyango kunye nezitepsi zikwimithi eqinileyo yetsheri. Iikhabhathi ezifakwe ipaneli zinika ikhitshi ukuba libukeke, ikakhulu libhangqiwe ngee-greyite counters kunye ne-backsplash.
Ikhitshi ephefumlelweyo yanamhlanje idibanisa ngokugqibeleleyo kunye nezinto zangoku zoyilo / zorhwebo. Imigangatho ziithayile ezibomvu ze-antique, inika isibheno esirhabaxa, esirhabaxa. Iikhabhathi zasekhitshini zenziwe ngetsheri eqinileyo enamacala athe tye, acocekileyo ngenkangeleko yanamhlanje egqibeleleyo. Iishelufa ezingaphezulu zonyusa uphahla oluphezulu, zihlala kwindawo eninzi yodonga kwaye zikwindibaniselwano yeeshelfu ezivulekileyo kunye neekhabhathi. Imiphezulu yeetafile zekhonkrithi zongeza ukuluhlaza, ukuziva kwemizi-mveliso kwindawo, nokuba kuphuculwe kukusetyenziswa kwendawo yokubeka ingqayi ephezulu ebekwe kanye ngasentla kwesiqithi sekhitshi.
Iinkcukacha zephaneli ezintle kunye neo-classic motifs zibonakalisa yonke le khitshi yeenkuni. Ikhitshi linxibelelana ngqo nendawo encinci yokutyela ngomthi omnyama ogqityiweyo. Uya kubona ukuba ikhitshi lenza nkulu indawo ekhoyo eludongeni kunye nokuphakama kwesilingi, isebenzisa uninzi lwayo njengendawo yokugcina / iikhabhathi, ishiya uninzi lweendawo zokubala kwisiqithi sasekhitshini nakwelinye icala lekhitshi.
Ikhitshi eliphangaleleyo lanamhlanje elisebenzisa iikhabhathi zekhitshi ezilungiselelwe ngokulula kumthi oqinileyo we-cherry, ene-granite emnyama eqinileyo. Elinye icala lekhitshi linee khabhathi ezinobude obupheleleyo bomgangatho ukuya phezulu, kunye nodonga olunye olunezikhabhathi ezisisiseko kwaye zingenazo iikhabhathi ezingaphezulu, ukunceda ukwenza ikhitshi libukeke lincinci. Kukho isiqithi esikhulu sekhitshi embindini esibonelela ngokulungiselela ngaphezulu, kwaye sifakwe ilitye lesepha elimpunga.
Esi sithuba sekhitshi sibekwe kwikona engaqhelekanga yegumbi, sikhokelela kubume bekhitshi / ubume obukhethekileyo. Iiplanga zomthi oqinileyo ze-cherry zihombisa imigangatho, ngelixa iindonga zapeyintwa ngombala omhlophe ukunceda ithoni phantsi kombala weenkuni. Ikhitshi lisebenzisa iingcango ezihonjiswe ngamaplanga kwi-cherry eqinileyo, enegranite ebomvu ebomvu. Kwi-backsplash yayo kukho iithayile zeglasi emthubi namdaka, ezenza ipateni kunye nokuthambeka kumphezulu. Isiqithi sekhitshi embindini sinemilo engaqhelekanga, njengoko silandela imilo yegumbi.
Eli likhitshi lanamhlanje elisebenzisa iikhabhathi zasekhitshini ezimodyuli ezinemigca ecocekileyo, yokuxinana, okwenza ukuba uve kakuhle. Iikhabhathi zekhitshi zazilaminishwe ngombala omdaka we-cherry, wahonjiswa ngegranite emnyama. Oku kudityaniswe nekhabhathi yanamhlanje / idrowa etsala ukugqitywa kwentsimbi engenasici, egqibezela inkangeleko yanamhlanje ekhitshini.
Ikhitshi eliqhelekileyo elisebenzisa amakhabhathi amnyama e-cherry enamakhitshi aneenkcukacha ezilula zepaneli, ukudala ukujonga okwangoku. Iikhabhathi ezisisiseko zisebenzisa igranite engwevu ngokubala itafile kunye neethayile zemibala ngokudityaniswa kokuphuzi kunye nokubomvu kwi-backsplash. Ezi khabhathi zabekwa ngokuchasene neendonga ezityheli zegolide kunye nomgangatho okhanyayo weenkuni ze-cherry, kudala umoya oshushu ngokwenene ekhitshini.
Ngokukhetha okuninzi onokukhetha kuko, ukukhetha umbala weplititi yegranite efanelekileyo yeekhabhathi zakho zekherry kunokudideka. Nangona kunjalo, uhlobo oluchanekileyo lombala wegranite wokutshatisa neekhabhathi zetsheri ziya kuxhomekeka kakhulu kwinkangeleko ocinga ngayo ekhitshini lakho kunye nefuthe ofuna ukuliphumeza.
Njengohlobo ngalunye kunye nombala wegranite onika umlinganiswa owahlukileyo, unokukhetha, udibanise, uncedise okanye uphucule. Nokuba yeyiphi kwezi okhetha ukuyiphumeza ekhitshini lakho, iziphumo ziya kuhlala ziyilo elimangalisayo elinomtsalane nelinomtsalane. Apha ngezantsi, sikunika eminye imizekelo yemibala yokuphanda ngegranite ehamba kakuhle nekhabhathi enombala wecherry.
Umahluko kunye negranite ekhanyayo -Igranite enemibala ekhanyayo zezo ziwela phantsi komhlophe ukuya kwiithowuni ze-beige ezimhlophe. Ngokuchasene nenkolelo yokuba le mibala ngamanye amaxesha yenza ukuba izithuba zibukeke zityhafile okanye zicacile, isitopu esimhlophe okanye esimnyama segranite sinokukhanyisa ikhitshi ukuba sibhangqiwe ngeekhabhathi ezimnyama. Banikezela ngenkangeleko engapheliyo kunye ne-classic flair eya kuhlala iminyaka.
Imibala yegranite ekhanyayo lukhetho olufanelekileyo lokukhanyisa ikhitshi esele ilawulwa ziikhabhathi ezibomvu ezimnyama. Kuba iinkuni ze-cherry zityebile, abanye abaninikhaya bakhetha i-countertop enombala okhanyayo ukwenza indawo ingaphantsi. Lo mbala ugqibelele nawo, ukuba ufuna ukwenza iikhikhini ezincinci zibonakale zinkulu.
Ukukhanya okukhanyayo kwegranite nako kuza ngeepateni ezahlukeneyo kwaye uninzi lusebenza kakuhle ngokulungiswa kakuhle komthi wetsheri. Xa ukhetha uhlobo oluchanekileyo lwegranite ekhanyayo yokuhamba neekhabhathi zetsheri, khetha ezo zinepateni yokuthambisa efana neemabhile kuba ezi azinayo ipateni exakekileyo enzima kakhulu emehlweni.
Umsebenzi wegranite okhanyayo uyasebenza ngokugqibeleleyo ekuziseni ibhalansi ekhitshini kunye neekhabhathi zekherry. Kubalulekile ukunika ugxininiso ekudaleni umahluko njengoko yenye yezinto kuyilo lwekhitshi.
Nayi eminye imizekelo yegranite enemibala ekhanyayo eya kuhamba kakuhle kunye nekhabhathi yekhitshi yecherry:
UKashmir Mhlophe -Kashmir inyengane emhlophe yenye yeentlobo ezithandwayo zegranite emhlophe kwintengiso. Inotyikityo lwetyuwa kunye nepepile ekhangeleka ngokuqaqamba kwe-quartz e-grey ash, mica emnyama kunye ne-feldspar emhlophe. Kwezinye izinto ezahlukeneyo, iKashmir White inyengane inombala omnyama we-burgundy ovela kubukho be-garnet. Eli lizwi liphantsi lenza umdlalo ofanelekileyo kumbala ofudumeleyo weekhabhathi zetsheri. Umbala wokukhanya opheleleyo we Kashmir countertop emhlophe ukhanyisa isithuba ngokunciphisa ubuncwane beekhabhathi zetsheri.
Intili White Granite -I-Valley granite emhlophe luhlobo lwegranite olufana nembonakalo yemarble. Ngeepateni zokuthambisa ezintle ezibonakala ngathi zigeleza amanzi kunye nemvelaphi emhlophe enemithambo ethambileyo engwevu, i-burgundy flecks kunye neeminerali zentsimbi, oku kunika umbono wobunewunewu o izithuba zasekhitshini.
Ukuthamba kombala wayo kunye nokulula kwepateni yawo ngumdlalo ogqwesileyo kumbala onzulu weekhabhathi zetsheri. Kwakhona, ubukho be-burgundy specks kumphezulu wayo buhambelana ne-undertones ebomvu kwimithi ye-cherry. Sebenzisa olu hlobo lweetoni zokubala phantsi kobutyebi beekhabethe zecherry ngelixa uvelisa indawo eqaqambileyo, enomoya neyamkelekileyo.
Izinto zakudala zegolide - Ikwabizwa ngokuba yiParadise yeGolide lenyengane, igranite yentsimbi egolide iphawulwa ngemvelaphi emhlophe emhlophe enebala elimnyama elityheli kunye negolide emnyama. Olu hlobo lwegranite ngumdlalo ogqibeleleyo weekhabhathi zekherry kuba lwenza ibhalansi phakathi kokukhanya kunye nemibala emnyama. Ngaphandle kwalonto, umbala wayo mellow ukhanyisela ngokukhawuleza igumbi .Yiya ngegranite yegolide ye-antique ukuba ufuna ixesha elingasentla lokukhetha iikhabhathi zakho zekherry njengoko izisa ubuhle bakudala kwindawo.
Ukudibanisa negranite enemibala yomhlaba -I-granite enemibala yoMhlaba zizalisekiso ezifanelekileyo kwiikhabhathi zetsheri kuba zizisa uvakalelo lwendalo kwindawo. Oku kufanelekile kakhulu ukuba ufuna ukufezekisa isikimu sombala we-monochromatic ekhitshini lakho.
Igranite enemibala yomhlaba zezo zinombala obalaseleyo wee-brown brown. I-Tan okanye i-granite eBrown ineetoni zomhlaba ezityebileyo ezahlukeneyo ukusuka kwitani ekhanyayo, i-sienna ukuya kumdaka omnyama. Olu hlobo lwegranite luhlala lunemigca kunye namachaphaza amaminerali amnyama agqamisa umhlaba okanye isanti. Igranite ekhanyayo emdaka ikwangumdlalo omnandi kolu hlobo lwekhabhathi yekhitshi. Xa zidityaniswe kunye, zenza indawo efudumeleyo, ekhaya kwaye iyamema.
Nayi eminye imizekelo yegranite enemibala yomhlaba ehamba kakuhle kunye nekhabhathi yekhitshi yecherry:
ISanta Cecilia Granite -Nangona ihlelwe njengefomathi ye-beige granite, iSanta Cecilia inyengane inombala omdaka ngombala. Imvelaphi yaseBrazil, olu hlobo lwegranite lunemibala enombala we-beige kunye nobusi egxininiswe ngamachaphaza e-tan, igolide kunye ne-burgundy enemithambo emnyama engwevu. Umbala ofudumeleyo weSanta Cecilia granite udibana kakuhle nombala wendalo weekhabhathi zekherry, esenza indibaniselwano ehambelanayo kodwa enomtsalane.
IAlmond yegolide -Ilitye lenyengane yegolide ye-Almond ibonakaliswa ngombala oshushu obomdaka obalaseliswa ngamachokoza eepesika, iburgundy flecks kunye nequartz. Ukudityaniswa kwale mibala kunye nephethini yayo ye-veining ivelisa umdlalo ogqibeleleyo kwikhabhinethi yecherry. Le duo ikwenza kube lula ukufaka ezinye izinto kuyilo- ezinje ngezixhobo okanye iintyatyambo. Isebenza kakuhle ukuba ufuna ukwazisa umbala okhanyayo ekhitshini lakho.
U-Ivory Brown - Ikwabizwa ngokuba yigolide yophondo lwendlovu okanye i-shivhite ye-ivory granite, i-ivory brown granite ibonakaliswa yipesika, i-burgundy kunye neqela le-quartz ngaphezulu kokukhanya okungwevu. Olu hlobo lwegranite luvela e-India kwaye lunembonakalo egudileyo ephakathi kwaye ubukhulu becala lubomvana ngombala. Xa kuthelekiswa nezinye iigranite zomhlaba ezineetoni ezikhankanywe apha, inyengane yophondo lwendlovu inombala okhanyayo kuba isiseko sayo ngokuyintloko siyi-cream hue.
Yenza umdlalo omninzi kuba ipateni yayo ye-veining izalisa iitoni ezibomvu ezityebileyo kunye neepateni zekorini yeekhabhathi zekherry. Umbala wokukhanya kwawo unika ulungelelwano ngelixa iphantsi kwawo omdaka edala ukuhambelana kwemibala. Isiseko esiphambili sokhrimu wenyengane emdaka yophondo lwendlovu ikwanika iikhitshi imvakalelo evuleke ngakumbi, ibenza babonakale banzi ngakumbi kwaye baqaqambile. Kulula kwakhona ukongeza izixhobo kule countertop kunye nekhabhathi yombala / indibaniselwano yezinto.
I-Granite ebomvu ebomvu -I-granite emdaka ebomvu ikwabizwa ngokuba yi-chestnut brown okanye i-antique granite yobhedu. Olu hlobo lwegranite emdaka lunepateni etyebileyo kunye nombala ongaguquguqukiyo obomvu bumnyama, mnyama namdaka kuyo yonke. Phakathi kwemizekelo yethoni lenyengane yomhlaba ekhankanywe apha, itan brown granite inombala umnyama.
Ubuhle begrey granite emdaka kukuba umbala wayo utshintsha yonke imini, kuxhomekeke kukuvezwa kwayo kukukhanya. Ngaphantsi kwezibane eziqaqambileyo, iithoni ezikhanyayo ezimdaka kunye nobomvu ziye zicace ngakumbi kwaye zibonakale, ngelixa ukukhanya okungaphantsi, isiseko saso esimdaka ngombala siya siba sikhulu.
Ubuncwane obucekeceke obumnyama obomvu kunye nobomvu obunzulu benza umbala weekhabethe zekherry zivelise ngakumbi, zisenza umdlalo ogqibeleleyo ongadluli kakhulu. Olu dibaniso ludibaniswe kakuhle kunye nezinto ezikhanyayo ezibuyela emva ezisebenza njengezinto ezihambelanayo ezibonakalayo ezenza zombini i-countertop kunye neekhabhinethi zivele. Izixhobo zensimbi ezingenasici zinika le duo inkangeleko enomdla ngakumbi.
Yandisa iikhabhathi zetsheri ngegranite emnyama -Igranite enombala omnyama ubukhulu becala yenziwe ngabantu abamnyama kunye nomdaka omnyama. Nangona idityaniswe kakuhle ngokukhanya ukuya phakathi kwiikhabhathi zokhuni ezinemibala, igranite enombala omnyama isenokusetyenziswa kunye neekhabhathi ezimnyama nezinzulu ezinemibala ukufezekisa umdlalo omninzi kwisithuba. Igranite enombala omnyama nayo yenza iikhitshi zibukeke zifudumele ngakumbi, zigodukile kwaye ziyamema.
Indibaniselwano yegranite enemibala emnyama kunye nekhabhathi zetsheri ayithandwa kakhulu xa kuthelekiswa nemibala ekhanyayo kunye neetoni zomhlaba. Nangona kunjalo, olu lukhetho oluhle kakhulu ukuba ufuna ukongeza ubukhulu kunye nobunzulu kuyilo lwakho lweekhikhini. Xa ubhangqiwe nge-countertop emnyama, iithoni zangaphantsi zekhabethe zetsheri ziphuma ngaphezulu, ngaloo ndlela zenza ukubonakala okutyebileyo kunye nokujonga okuhle.
Kungaba yinto ekhohlisayo ukuphuma xa kuthelekiswa neminye imibala yemibala kodwa kunye nepateni efanelekileyo yegranite, iya kusebenza ngokugqibeleleyo ukuvelisa uyilo lwekhitshi olutyebileyo nolunomdla. Sukuya kwiipateni zokuthambisa ezi-edgy kakhulu okanye ezixakekileyo njengoko ngamanye amaxesha kunokubangela isiphithiphithi esibonakalayo. Qiniseka ukuba ukhetha iphethini ngobulumko ukuze ungenzi ikhitshi lakho lixakeke okanye libukhali kakhulu.
Indibaniselwano yetafile emnyama kunye nekhabhathi zetsheri ifaneleke ngakumbi kwiikhitshi ezinkulu, kuba inomdla wokwenza indawo encinci ibonakale icinezelekile kwaye inzima.
Nazi ezinye iindlela ezinombala omnyama wegranite onokuzisebenzisa ukutshatisa iikhabhathi zekherry:
Cosmic Black Granite - Ikwabizwa ngokuba yi-matrix black granite, olu hlobo lwegranite enombala omnyama luphawulwa ngamalahle amnyama amnyama amalahle amade ajikelezayo amhlophe, amabala e-amber kunye ne-burgundy. Iza ngolunye umahluko, apho iipokotho ze-quartz zikwabonakala, zisenza ilitye libe ngaphezulu. Le countertop izisa ubuhle bendalo kunye nobuhle beklasikhi ekhitshini.
I-cosmic emnyama inyengane inika isixa esinomdla sobunzulu kunye nokuthelekisa kwiikhabhathi zetsheri. Iyamangalisa kodwa ayigqithisanga kakhulu kwaye ayirhuqi. Indibaniselwano yegranite emnyama emnyama kunye nekhabhathi zekherry zifaneleke ngakumbi kwiikhitshi ezinkulu. Oku kukwabonelela ngokulula ngakumbi kuthelekiso lwezixhobo kunye nezinye iimpahla njengoko zihamba kakuhle kuninzi lokugqitywa. Umbala ogqwesileyo osebenza kolu dibaniso yibhrashi ye-nickel ebrashiweyo kunye nezixhobo zentsimbi ezingenasinxibe njengoko zihambelana nomgangatho wesilivere kumphezulu wegranite.
IGreen Granite -Ihlathi elimnyama leGranite yigranite emnyama enombala omnyama onesiseko esimnyama esinamabala amhlophe, amber kunye ne-burgundy kuwo wonke umphezulu. Njengombala omnyama we-cosmic, i-granite emnyama yehlathi isebenza kakuhle kunye neekhabhathi zetsheri ngenxa yokwahluka okubonakalayo. Khetha izixhobo zensimbi ezingenasici kunye nezixhobo zesilivere ezibrashiweyo ukuze uhambe nale ndawo yokuphamba kunye nokudityaniswa kwekhabinethi.
Yiya kubunewunewu obongezelelweyo ngegolide lenyengane -Nangona igranite yegolide ngamanye amaxesha inokuhlelwa njenge-granite enemibala ekhanyayo okanye inyengane emdaka, zahlukile ngokwahlukileyo kwabanye ngokweempawu. Igolide lenyengane yaziwa ngokuzisa ubunewunewu kunye nobushushu kunye nokukhanya kwindawo.
Ikwabizwa ngokuba yigranite etyheli, imiphezulu yeetafile zegolide lenyengane ineetoni ezityebileyo zobusi, tyheli okanye igolide. Olu hlobo lwegranite luhlala lunepateni yokuhomba okumnandi kwimixube ebomvu, i-burgundy, emnyama okanye i-crystallizations ye-mica, feldspar okanye i-quartz. Ukudityaniswa kwemibala enombala ngokuchasene nembala yegolide enombala wobusi kunika iimpawu ezithandekayo ezibonisa ubuhle obufanelekileyo nekhabhathi yokhitshi enemibala emnyama.
Nazi ezinye zeendlela zegolide zegranite onokuzisebenzisa ukutshatisa iikhabhathi zetsheri:
I-Venetian Gold Granite -I-granite yegolide ye-venetian inetoni yegolide ebalaseleyo, enombala obomvu ocacileyo, o-amber, ongwevu, omdaka ngombala kunye nephethini ekhanyayo yokuhombisa ngaphezulu kwemvelaphi e-creamy beige.
Njengoninzi lweentlobo zegranite ezikhankanywe apha, ubukho bemikhombe ebomvu buyenza ifanelane ngokugqibeleleyo nobomvu obuphantsi kwiimbewu zomthi wetsheri.
Indibaniselwano enomdla yegranite yegolide yeVenetian kunye nekhabhathi ezityebileyo ze-cherry zivelisa indawo yokuphekela ekhitshini ngokwendalo, ifudumale kwaye yamkelekile.
Gcwalisa iikhabhathi zetsheri ezinegranite eluhlaza -Ukuba ubhekisa kwivili lemibala, isikimu sombala esincomekayo senziwe ngemibala emibini ebekwe ejongene. Kuba iikhabhathi zekherry zinee-undertones ezibomvu, umbala ohambelana nohambelanayo oluhlaza-ke kufanelekile ukuba igranite eluhlaza inike enye indlela yokuphamba esebenzayo ehambelana nekhabhathi zekherry ezinokukunceda uvelise uyilo olumangalisayo lwekhitshi.
Xa kuthelekiswa nolunye udibaniso, oku kunzima ngakumbi ukukhupha. Njengoko abanye banokunxulumana kwangoko ukudityaniswa kombala oluhlaza nobomvu kwinto evusa imvakalelo yeKrisimesi. Nangona kunjalo, oku kusebenza ngokumangalisayo ekudaleni useto lwekhitshi olutyebileyo, oluhle kwaye luhlukile. Igranite eluhlaza yindawo ekugxilwe kuyo iyodwa, ngenxa yoko akukho sizathu sokuba ungahambeli kude nayo.
Isitshixo sokudibanisa i-countertop eluhlaza kunye nekhabhinethi ebomvu ebomvu kukukhetha indlela efanelekileyo kunye nokongezwa kwento yokunciphisa. Ngalo lonke ixesha jonga i-undertones elungileyo kwipateni yegranites, njengombala obomvu okanye we-burgundy, njengoko oku kuhambelana nemibala yeekhabhathi zekherry. Sukuba nzima kakhulu kwiipateni, ngaphandle kokuba ufuna ukwenza umdlalo weqonga. Kwaye uhlala usongeza into yokunciphisa i-countertop yakho eluhlaza kunye neekhabethe ezibomvu ze-cherry-nokuba ingaba ngumbala okhanyayo weendonga, umgangatho okanye izixhobo.
Nazi ezinye iindlela zokhetho zegranite onokuzisebenzisa ukutshatisa iikhabhathi zakho zetsheri:
I-Granite eluhlaza yaseHawaii -Ubonakaliswe ngombala wesiseko somnquma onombala ongaphantsi ongwevu, imilo emthubi, pinki omnyama kunye ne-burgundy fleck, olu hlobo lwegranite luyaziwa ngenkangeleko yalo ecekeceke. Xa ubhangqiwe neekhabhathi zekherry, oko kukhokelela kukwahluka okupheleleyo okubonisa ubuhle kunye nobunkunkqele.
Ezinye iingcebiso zokukunceda ukhethe i-countertop efanelekileyo ye-granite ukufanisa iikhabhinethi zakho ze-cherry:
-Thathela ingqalelo izinto ezongezelelekileyo ezinje ngokukhanyisa, izixhobo zombane, ukutyibilika kunye nezinto zokubuyela umva ukuvelisa uyilo oluhambelanayo nolungeleleneyo lwekhitshi.
Zombini iinkuni kunye negranite zinendawo ephantsi yombala okhoyo kuzo. Iikhabhathi zecherry, umzekelo zinee-undertones ezibomvu, i-fir kunye ne-oki zine-orenji ngelixa i-pine kunye ne-bamboo zibonakala zimthubi. Le mibala yesibini inokusetyenziswa njengesikhokelo sokudibanisa izinto ezahlukeneyo ekhitshini lakho.
- Yintoni omele ukuyiphepha: iikhabhathi ezibomvu zetsheri kumacwecwe abomvu kukudibana kokungqubana. Zama ukuwuthintela lo mbala njengoko uthanda ukongamela ubuhle bendalo bomthi.
Ukuya kukhangeleka ngakumbi kwimizi-mveliso yanamhlanje, eli khitshi lidibanisa ukugqitywa kweenkuni ezimbini ezahlukeneyo kwikhabhathi yayo. Ngaphezulu kunye nekhabhathi ezinobungakanani obugcweleyo zazinamathiselwe ngomthi wetsheri ukufanisa ukugqitywa komgangatho, ngelixa iikhabhathi ezisisiseko, kubandakanya nokusetyenziswa kwesiqithi sasekhitshini somthi omnyama oki. Ukunceda ithoni phantsi kunye nokunciphisa ukudibanisa okubonakala ngathi kungqubana kokugqitywa kweenkuni, igranite emhlophe yayisetyenziswa kwitafile kunye nomqolo obuyela umva, kudala indawo enombala ongathathi hlangothi phakathi. Ukugxininisa iikhabhathi zekhitshi kukuxubha izibane zentsimbi ezingenasici, ukunika ikhitshi imbonakalo yemizi-mveliso.
Ukujonga inkangeleko ebukekayo nenodidi, eli khitshi lisebenzisa ikhitshi yesiko lendabuko eneenkcukacha zomthi eziguqukileyo kunye nokugqitywa komthi omnyama wecherry, ogqunywe ngamatye amnyama esepha. Iikhabhathi zekhitshi ngokuqinisekileyo zivelisa umahluko omkhulu obekwe ngokuchasene nodonga olukhazimlisiweyo olukhilimu, imigangatho yamatye ekrimu kunye neetayile zokubuyela umva ngamatye.
Iikhitshi zeenkuni zeCherry zijongeka zimangalisa ngoyilo lwekhitshi yelizwe. Leli khitshi libonisa isitayela selizwe kunye nokukhuthazwa kwiphondo laseSpain, usebenzisa iinkcukacha zomthi eziguqukileyo kunye nezinye izinto eziphefumlelweyo zaseSpain. Iikhabhathi zekhitshi zineepaneli ezintle ezenziwe ngamaplanga afanayo, zaze zagqitywa ngombala weenkuni omnyama we-cherry, ehambelana nokugqitywa kwebarstool. Kwi-countertop, kwakusetyenziswa i-granite etyheli kwaye i-backsplash isebenzisa iithayile ezifanayo ezenziwe ngombala otyheli. Ikhitshi libekwe ngokuchasene nodonga olutyheli olukhanyayo kunye nemigangatho yamatye e-oatmeal emhlophe, edala ukukhanya kunye nokufudumala ekhitshini.
Iikhitshi zeenkuni zeCherry zihlala zibhangqiwe kunye nekhabhathi yesiko lesiko elikhangeleka lifudumele kwaye lihle. Ezi khabhathi zinemibala yeklasikhi eyongeza umnxeba wokugqitywa kwegolide kwiinkcukacha zokukrola, ukuzisa isibheno esihle ngakumbi nesiyolo kuyilo. Ukongeza kulwazi lwegolide kukutsalwa okugqityiweyo kwegolide, okuthe gca ngokuchasene neekhabhathi zomthi zetsheri ezigqityiweyo. Ukunceda ukuthomalalisa iithoni ezibomvu zomthi ziindonga ezinombala okhilimu, imigangatho emhlophe kunye ne-quartz slab emthubi esetyenziswa kwiitafile.
Izimvo zeSiqithi seKhitshi - Iikhitshi eziMnyama eziMnyama - Iikhitshi ezineeKhabhinethi eziMhlophe
izakhiwo ezivulekileyo zekhitshi
indlela yokwenza intyatyambo intombazana yentombazana
iilokhwe zokunxiba kwimitshato njengendwendwe